သီလရှင်ဝတ်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို သွားတွေ့ကာ ကြည်ညိုလွန်းလို့ ထိုင်ကတော့ခဲ့တဲ့ စွမ်းဇာနည် – Cele Posts
သီလရှင်ဝတ်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို သွားတွေ့ကာ ကြည်ညိုလွန်းလို့ ထိုင်ကတော့ခဲ့တဲ့ စွမ်းဇာနည်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်မင်းသားလေး စွမ်းဇာနည် ကတော့ တစ်ချိန်တုန်း က အရမ်းကို ဆိုးသွမ်းခဲ့ တာကြောင့် အနုပညာလောကမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေသူပါနော်။ မူးယစ်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီး ချစ်သူမိန်းကလေး ကိုတောင် ဒဏ်ရာရအောင် လုပ်ခဲ့သူပါ။ အခုတော့လည်း ဆေးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်လိမ္မာလာပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ပြန်လုပ်နေပါပြီနော်။
သူ့ကောင်မလေး ကိုလည်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်ပေးနေတာ ကိုလည်း အားလုံး လည်း မြင်တွေ့ကြမှာပါနော်။ စွမ်းရဲ့ ချစ်သူကလည်း သူ့ဇာတ်သဘင်ထဲက အငြိမ့် မင်းသမီးတစ်လက် ပါပဲနော်။ ရုပ်လေး ကလည်း ချောပြီးစွမ်းအပေါ်ကိုလည်း တကယ်ချစ် တာပါနော်
စွမ်းရဲ့ ကောင်မလေးဟာ သီလရှင်ဝတ် နေတာ တော်တော်ကြာ နေပါပြီနော်။ စွမ်းတစ်ယောက် သီလရှင်ကျောင်းသို့ သွားပြီး ဆရာလေးကို လာတွေ့တဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ထားလို့ ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားများနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
သီလရှငျဝတျနတေဲ့ ခဈြသူကောငျမလေးကို သှားတှကေ့ာ ကွညျညိုလှနျးလို့ ထိုငျကတော့ခဲ့တဲ့ စှမျးဇာနညျ
ပရိသတျကွီးရေ ဇာတျမငျးသားလေး စှမျးဇာနညျ ကတော့ တဈခြိနျတုနျး က အရမျးကို ဆိုးသှမျးခဲ့ တာကွောငျ့ အနုပညာလောကမှာ နာမညျဆိုးနဲ့ ကြျောကွားနသေူပါနျော။ မူးယဈဆေးတှေ အလှနျအကြှံသုံးစှဲပွီး ခဈြသူမိနျးကလေး ကိုတောငျ ဒဏျရာရအောငျ လုပျခဲ့သူပါ။ အခုတော့လညျး ဆေးဖွတျပွီးနောကျပိုငျး ပွနျလိမ်မာလာပွီး အနုပညာအလုပျတှလေညျး ပွနျလုပျနပေါပွီနျော။
သူ့ကောငျမလေး ကိုလညျး အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ ဂရုစိုကျပေးနတော ကိုလညျး အားလုံး လညျး မွငျတှကွေ့မှာပါနျော။ စှမျးရဲ့ ခဈြသူကလညျး သူ့ဇာတျသဘငျထဲက အငွိမျ့ မငျးသမီးတဈလကျ ပါပဲနျော။ ရုပျလေး ကလညျး ခြောပွီးစှမျးအပျေါကိုလညျး တကယျခဈြ တာပါနျော
စှမျးရဲ့ ကောငျမလေးဟာ သီလရှငျဝတျ နတော တျောတျောကွာ နပေါပွီနျော။ စှမျးတဈယောကျ သီလရှငျကြောငျးသို့ သှားပွီး ဆရာလေးကို လာတှတေဲ့ ပုံလေးတှေ တငျထားလို့ ကွညျညိုသဒ်ဒါပှားမြားနိုငျအောငျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုလှုပ်ခတ်သွားစေအောင် သူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်မိုက်မိုက် ဒွန့်ခါပြနေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်ရဲ့ဗီဒီယို
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် တရားဝင်စာတင်လိုက်တဲ့ ခန့်စည်သူ